ဘာသာတရား နှင့် ဘာသာမရှိသူ (ကမ္ဘာသစ်ဆီသို့ - Go to the new Earth)
သင်သည် ဘာသာတရားများကိုလေးစားသော်လည်း ဘာသာမရှိ Free Thinker (or) Atheist ဖြစ်ပါက
၃။ သင်သည်အနာရောဂါ၊ဒုက္ခဆင်းရဲ နဲသောသူဖြစ်ရမည်။
၄။ သင်သည် ပညာမတောက်တခေါက်တတ်သောသူဖြစ်ရမည်။
၅။ သင်သည်မိမိအချိန်၊လုပ်စရာများကို စနစ်တကျလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
၆။ စားဝင်၊အိပ်ပျော်၊ သွားလာနိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ရမည်။
ကျွန်ုပ်မှာ အထက်ပါအချက်များမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်အစွမ်းဖြင့် ဤလောကကြီးတွင် ငယ်စဉ်ကရပ်တည်ခဲ့ဖူးပါသည်။ သို့သော်ယခုအခါ ကျွန်ုပ်အစွမ်းဖြင့် ရပ်တည်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ အားနည်းချက်များ၊ မှားယွင်းမှုများ၊ ဆရာလုပ်မှုများ၊ စကားနားထိုးတတ်မှုများ၊ မာန်မာနများ၊ အပြစ်တင်တတ်မှုများ၊ ကိုယ်ကျိုးရှာခြင်းများ စသည့်အောက်တန်းကျသော အကျင့်စာရိတ္တများ ရှိပါသည်။ မိမိကိုယ်ကို မြင့်မြတ်သည်ဟု ခံယူပြီး၊ သူတောင်းစားကဲ့သို့ ဒုက္ခရောက် အားနည်းသူများအား စာနာခြင်းမဲ့စွာ ဥပက္ခာပြုတတ်ပါသည်။ မိမိအားနည်းချက်များကို မိမိစွမ်းအားဖြင့် အစွမ်းကုန် ပြုပြင်ခဲ့သော်လည်း ဘယ်သောခါမှ ကျေနပ်ဖွယ်အဆင့်ရောက်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘာသာတရားတစ်ခု၏ ဆုံးမမှုအောက်တွင်သာ ဘ၀ကိုရပ်တည်နိုင်ပါမည်။
Faith ယုံကြည်ချက်သည် လူတိုင်းတွင် ရှိသည်။ ယုံကြည်ချက်ဖြင့် လူတိုင်းအသက်ရှင်ကြသည်။ ငွေ၊ ရာထူး၊ ပညာ၊ အာဏာ စသဖြင့် လိုချင်ကြသည်မှာ လူ့သဘာဝဖြစ်သော်လည်း မရနိုင်သောအခါ အံ့သြဘွယ်လူ့ဘဝကို စဉ်းစားမိကြသည်။ သိပ္ပံပညာရှင် အိုင်စတိုင်းက အစအဆုံးမရှိခြင်း၂ခုမှာ စင်္ကြာဝဌာနှင့် လူ၏မိုက်မဲမှုဖြစ်သည် ..ဟု ဆိုသည်။ မိမိယုံကြည်ချက်သည် ဘာဖြစ်နေပါသလဲ။ အချို့သည် သနားစရာ စွဲလမ်းမှုများဖြင့် အသက်ရှင်နေသည်။ မူရစ်ဆေး၊ လိင်၊ အာဏာ၊ ငွေ၊ အချစ်၊ အရှက် ..စသည်ကိုကို အသက်နှင့်လဲပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြသော အလွန်မိုက်မဲသူများ ဖြစ်သည်။ ထိုအုပ်စု ကျွန်ုပ် မပါလိုပါ။
ဘာသာရေး ယုံကြည်ချက်နှင့် ဝါဒ ယုံကြည်ချက်များမှာ အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ ဘာသာရေးတွင် ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားတစ်ဆူ ရှိသည်ဟု ယုံခြင်းမှာ ကမ္ဘာလူဦးရေ အများစုဖြစ်သည်။ ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားမရှိ ယုံကြည်သော်လည်း စာရိတ္တသွန်သင်ချက် အလွန်ကောင်းလှသော ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ကွန်ဖြူးရှပ်၊ တာအို စသည့် ယုံကြည်ချက်များလည်း ရှိသည်။ ဖန်ဆင်းရျင်ဘုရားလဲမရှိ၊ ကိုယ်ကျေနပ်၊ သူများကို မထိခိုက်လျှင် ပြီးပြီ၊ဆိုသောသူများတွင်၊ အဆိုးဆုံးမှာ လောကကြီးက ခဏတဖြုတ်နေတာ၊ ပျော်ပျော်နေ သေခဲ ..ဟု ပျော်ပါးနေသူများ ဖြစ်သည်။
ဘာသာတရား အားလုံးသည် မိမိဘဝကို ကျေနပ်၊ ရောင့်ရဲအောင် သွန်သင်ဆုံးမခြင်းဖြစ်သည်။ ငွေနှင့်အာဏာထက် ပိုသာလွန်သော ဘဝကျေနပ်ခြင်းမှ လူလေးစားမှု (အရေးပါမှု၊ အရေးပေးခံရမှု)ကို လိုလားခြင်းဖြစ်သည်။ လူကြိုက်များခြင်းနှင့် လူလေးစားခံရခြင်းမှ မတူညီပါ။ လူကြိုက်များအောင်၊ လူလေးစားခံရအောင် ကြိုးစားနေထိုင်ရင်းနှင့်ပင် လူ့ဘဝ၊ ဧကရာဇ်ကြီးများ၊ ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၊ Purpose of Live ဘဝရည်ရွယ်ချက်ကို ရှာဖွေရင်း နိဂုံးချုပ်သွားကြသည်။
တနည်းအားဖြင့် ကမ္ဘာသစ်ကို သဲသဲမဲမဲ ရှာဖွေကြသည်။ အာကာသယဉ် ဗွိုင်ယေဂျ ၂၀၁၄တွင် နေစင်္ကြာဝငြာ အပြင်သို့ ရောက်သွားလေပြီ။ အဆုံအစမရှိသော အနန္ဒစင်္ကြာဝငြာတွင် ကမ္ဘာသစ်ရှာနေသည့် သိပ္ပံပညာရှင်များတွင် ဖန်ဆင်းရှင်ထာဝရဘုရား ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ပြီး၊ ထာဝရဝိညာဉ်လောက ကမ္ဘာသစ်ကို ရှာဖွေနေသူများစွာလည်း ရှိပါသည်။ သိပ္ပံပညာနည်းဖြင့် လက်တွေ့ ကမ္ဘာသစ်တော့ တွေ့ဖို့ လမ်းမမြင်ပါ။ ဝိညာဉ်ကမ္ဘာသစ်ကို တွေ့ထားပြီးသူ များစွာ ရှိပါသည်။
ဘာသာတရားများတွင် သခင်ယေရှု၏ လမ်းပြမှု၊ လက်တွေ့ပြခဲ့သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ စွန့်လွှတ်အသေခံခြင်းစိတ်ဓါတ်နှင့် ရှင်ပြန်ထမြော့က်မှုမှာ ကျွန်ုပ်အတွက် ထာဝရအသက်လမ်းကြောင်း (ဝိညဉ် ကမ္ဘာသစ်) ပင်ဖြစ်ပါသည်။ April 29, 2011 at 5:57am
If you respect to all religion but you are no religion or Free Thinker or Atheist....
- You are busy with many tasks
- You hav enough income for eating, living and clothing
- You don't suffer from serious sickness and you are consider healthy
- You have formal education such asadiploma or degree..etc
- You are good in time management for your life and living, working..
- Of course, you have no problem of eat,sleep,living...
I don't have above situation at this moment. I once satisfy my life as those facts at my young age. Now, i can not stand by my own. Many of my weakness such as mistakes, teach-other, talk-in caustic and dissatisfied terms, pride, blame, selfishness are my low class character and behaviors. I tried to correct those weakness as my best way of effort also i will not reach satisfied myself. Living underateaching ofareligion is the best for me.
Everybody has "Faith". All are living with their own faith. It is nature of human being to get oney, rank, education, power ..etc. When he/she can tried many years and could not get those things, they start to think about wonderful life. Scientist Einstein said, there are two things "no beginning and no end". Those two things are "Universe and Stupidness-of-men". What is my faith? Some are living with addiction to drug, sex, power, money, love, shame ..etc. They try to protect with their life and they all are called soupidness. I do not want to be like this.
Religious faith and Philosophy faith are wonderful. Most of the religious faith is believeacreation God. Other group is not believingacreation God, their Philosophy faith such as Buddhist, Confucius, Taoism ..etc are based on next life, character, good attitude .. But there isagroup without believing above two faith. Their faith is to satisfy their life without affecting to others. The worst faith is "Live isashort and enjoy it, do all good or bad things while living".. This type is very dangerous faith.
All religion are teaching people how to satisfy own life. There is another thing "being respect by others" is more than power and money. Famous and Respect is too much different but look similar. People live to be famous or to be respected by people and great leaders, great emperors were died and end their life.
Alternately, we are looking for new earth seamlessly. Space vehicle "Voyager" travelled to the end of our sun-universe in 2014 to explore the endless universe. Scientist believe that there isa"new earth" inside the endless universe and they work very hard to look for "new earth". I thinks, all scientists will not find the "new earth" in this universe.
But, many people already found new earth. It is not is physical universe , they found at spiritual world.
Many religions showed love, surrender attitude but JESUS CHRIST practically showed to us. JESUS's Love, Die with sacrificed attitude, Surrender, and finally Alive again (resurrection) is my spiritual faith (New Earth, Spiritual World.